ဆေးရုံတွေ ဘယ်လောက် ထပ်ဆောက်နေပါ‌စေ ဒီနှစ်ချက် ကို မလိုက် နာရင် ကိုဗစ်ကို လုံးဝ အနိုင်မရနိုင် – Let Pan Daily
ဆေးရုံတွေ ဘယ်လောက် ထပ်ဆောက်နေပါ‌စေ ဒီနှစ်ချက် ကို မလိုက် နာရင် ကိုဗစ်ကို လုံးဝ အနိုင်မရနိုင်
Let Pan | October 13, 2020 | Local News | No Comments
ဆေးရုံတွေ ဘယ်လောက် ပဲ ထပ်ဆောက်ဆောက် အခြေခံအကျဆုံး mask တပ်တာနဲ့ social distancing ကို လူများများထည့်ပီး မတင်းကျပ် မကြပ်မတ်ရင် ဆရာဝန်တွေ volunteer တွေပါ လက်ပန်းကျ စိတ်ကုန်လာတော့မယ်။
ခုထိေ မးစေ့တွေ ချိတ်ကောင်းတုန်း.. Shopping mall တွေမှာ အရင်လို အီလေး ဆွဲ စျေးဝယ်နေတုန်း..(မနေ့ကဆို ဩချမိတယ်) ၂၀၀ ဒဏ်ရိုက်လို့ ၅၀၀၀ တန် ပေးရင် ဖမ်းတဲ့သူ ၄၈၀၀ ပြန်အမ်းဖို့ ခက်သွားပြီ….၁၀၀၀ တန် ၅ ယောက်လောက် ဆက်တိုက် ပေးသွားရင်ကို အကြွေ ၄၀၀၀ ဖိုး ဘယ်ကသွားရှာမလဲ..
ဂျပန်မှာ ဘယ်လို အင်္ဂလန်မှာ ဘယ်လို စင်ကာပူမှာဆို ဘယ်လို အဲ့ဒီလိုပဲ အဲဒီက စည်းကမ်းတွေ လိုပဲ မြန်မာပြည်က ရုံးတွေမှာ စက်ရုံတွေမှာ စျေးတွေမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အဝင်ဝကနေ ပြန်ထွက်တဲ့ထိ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတာပဲ… ဒီဥပဒေတွေကို ပြည်သူလိုက်နာအောင် အကောင်ထည် ဖော်မှုကသာ အားနည်းတာ.
လူတယောက် Q စဝင်တာကနေ + resultရ နောက်ဆုံး ဆေးရုံကနေ ဆင်းတဲ့ထိ ဆေးစစ်ခကနေ နေ/စားစရိတ် သိန်းချီကုန်တာ လူတိုင်းသိနေကြတာပဲ.. နေထိုင်ု ပုံစံအသစ်မှာ ကုန်ကျမှု သိပ်ကိုနည်းတဲ့ social distancing နဲ့ mask တပ်တာကို တင်းကျပ် ကြပ်မတ် ထိန်းကျောင်းဖို့ (ဖမ်းဖို့) လူထပ်မတိုးပဲ ဆေးရုံတွေ ပဲ ထပ်တိုးနေရင် တကယ် လုပ်ရတဲ့သူတွေ စိတ်ကုန်လာကြလိမ့်မယ်..
ပြောချင်တာက.. လယ်ကွက်ထဲ ဆေးရုံထပ်ဆောက် တာထက် စည်းကမ်းတင်းကျပ်ဖို့ လူများများထပ်တိုးပေး /ဒဏ်ကြေးထပ်တိုးပေး new normal လူမှုပုံစံသစ်နဲ့ မသွားနိုင်ရင် တတိုင်းပြည်လုံး နလန်မထူနိုင် အလုပ်ဆက်မလုပ်နိုင်ပဲ ငတ်တော့မှာ၊ ပြည်သူသိအောင် ပိုအသိပညာပေး..
ေဆး႐ုံေတြ ဘယ္ေလာက္ ပဲ ထပ္ေဆာက္ေဆာက္ အေျခခံအက်ဆုံး mask တပ္တာနဲ႔ social distancing ကို လူမ်ားမ်ားထည့္ပီး မတင္းက်ပ္ မၾကပ္မတ္ရင္ ဆရာဝန္ေတြ volunteer ေတြပါ လက္ပန္းက် စိတ္ကုန္လာေတာ့မယ္။
ခုထိေ မးေစ့ေတြ ခ်ိတ္ေကာင္းတုန္း.. Shopping mall ေတြမွာ အရင္လို အီေလး ဆြဲ ေစ်းဝယ္ေနတုန္း..(မေန႔ကဆို ဩခ်မိတယ္) ၂၀၀ ဒဏ္႐ိုက္လို႔ ၅၀၀၀ တန္ ေပးရင္ ဖမ္းတဲ့သူ ၄၈၀၀ ျပန္အမ္းဖို႔ ခက္သြားၿပီ….၁၀၀၀ တန္ ၅ ေယာက္ေလာက္ ဆက္တိုက္ ေပးသြားရင္ကို အေႂကြ ၄၀၀၀ ဖိုး ဘယ္ကသြားရွာမလဲ..
ဂ်ပန္မွာ ဘယ္လို အဂၤလန္မွာ ဘယ္လို စင္ကာပူမွာဆို ဘယ္လို အဲ့ဒီလိုပဲ အဲဒီက စည္းကမ္းေတြ လိုပဲ ျမန္မာျပည္က ႐ုံးေတြမွာ စက္႐ုံေတြမွာ ေစ်းေတြမွာ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အဝင္ဝကေန ျပန္ထြက္တဲ့ထိ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ထုတ္ျပန္ထားတာရွိတာပဲ… ဒီဥပေဒေတြကို ျပည္သူလိုက္နာေအာင္ အေကာင္ထည္ ေဖာ္မႈကသာ အားနည္းတာ.
လူတေယာက္ Q စဝင္တာကေန + resultရ ေနာက္ဆုံး ေဆး႐ုံကေန ဆင္းတဲ့ထိ ေဆးစစ္ခကေန ေန/စားစရိတ္ သိန္းခ်ီကုန္တာ လူတိုင္းသိေနၾကတာပဲ.. ေနထိုင္ု ပုံစံအသစ္မွာ ကုန္က်မႈ သိပ္ကိုနည္းတဲ့ social distancing နဲ႔ mask တပ္တာကို တင္းက်ပ္ ၾကပ္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ (ဖမ္းဖို႔) လူထပ္မတိုးပဲ ေဆး႐ုံေတြ ပဲ ထပ္တိုးေနရင္ တကယ္ လုပ္ရတဲ့သူေတြ စိတ္ကုန္လာၾကလိမ့္မယ္..
ေျပာခ်င္တာက.. လယ္ကြက္ထဲ ေဆး႐ုံထပ္ေဆာက္ တာထက္ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ဖို႔ လူမ်ားမ်ားထပ္တိုးေပး /ဒဏ္ေၾကးထပ္တိုးေပး new normal လူမႈပုံစံသစ္နဲ႔ မသြားႏိုင္ရင္ တတိုင္းျပည္လုံး နလန္မထူႏိုင္ အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ပဲ ငတ္ေတာ့မွာ၊ ျပည္သူသိေအာင္ ပိုအသိပညာေပး..
မႏၲေလး ျပည္ႀကီး တံခြန္က ေျမကိစၥ အရႈပ္ေတာ္ပုံ(႐ုပ္/သံ)
ရန်ကုန်မြို့မှာ စပါးအုံးလို မြွေကြီးတွေ အတွေ့များလာတာ ဘာကြောင့်လဲ
ရတနာပုံ သီခ်င္းျဖင့္ ေစာင္းအစြမ္းျပ တီးခတ္ သီဆိုႏိုင္သူ ပါရမီရွင္ ကေလးငယ္ (၂) ဦး(႐ုပ္သံ)
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေမ့ ရဲ႕ “လ ေရာင္ ေတာ”
ညို့အားပြင်း တဲ့ အလှတရားတွေ နဲ့ ပုရိသတွေကို ရင်ခုန်သံတွေ မြန်အောင် ဖမ်းစား လိုက် ပြန်တဲ့ မော်ဒယ် စုမြတ်ဖူး
ခန္ဓာကိုယ်က သဘာဝအလှတရား တွေ ပေါ်လွန်စေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ရေကူးကန် ထဲက ချီချီ ရဲ့ ဗီဒီယို
မောင်လေး တွေ ကို ရင်ဖိုအောင် ပုံလေးတွေ တင်ပေး လိုက် တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး
ချစ်တယ် ဆိုလည်း အမြန်ပြောတော့ အပျိုရီး ဖြစ်တော့မယ် ဆိုပြီး ချွဲချွဲ နွဲ့ နွဲ့ နဲ့ ပြောလာခဲ့တဲ့ “ခင်အင်ကြင်းကျော်”
ဆက်ဆီကျကျ အမူအယာတွေ နဲ့ ဆော့ကစားရင်း ပျော်ရွှင် နေသော အလှမယ် နန်းမွေ့စံ (ဗွီဒီယို)
ဘရာ မပါတဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်တွေ နဲ့ ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်းကို ခြွေချလိုက် ပြန်တဲ့ မျက်ဝန်း